Boodhka Real Madrid Oo Go'aan Kama Danbays Ah Ka Gaadhay Haddii Ay Barcelona Kula Tartamayaan Saxiixa Neymar Jr. - Gool24.Net
Boodhka Real Madrid Oo Go’aan Kama Danbays Ah Ka Gaadhay Haddii Ay Barcelona Kula Tartamayaan Saxiixa Neymar Jr.
Boodhka kooxda Real Madrid ayaa go’aan kama danbays ah ka gaadhay haddii ay kooxda ay xifiltamaan ee Barcelona ay kula tartamayaan saxiixa xidiga kooxda PSG iyo xulka Brazil ee Neymar Jr.
Kooxda PSG ayaa tiraba laba jeer kooxda Real Madrid waxay u soo bandhigeen saxiixa Neymar Jr kaas oo la xaqiijiyay in uu xagaagan iskaga baxayo kooxda PSG. Neymar ayaa ka soo xaadiri waayay xarunta tababarka kooxdiisa PSG waxaana sii xoogaystay khilaafka labada dhinac.
Barcelona ayaa waqti ku bixinaysa sidii ay kooxda PSG wada xaajoodyo ugala yeelan lahayd arinta Neymar Jr balse waxay PSG cadaysay in aanu wali jirin wax dalab rasmi ah oo ay Neymar Jr ay ka soo gudbiyeen kooxaha lala xidhiidhinayo.
Real Madrid ayaa sanado badan doonaysay saxiixa Neymar Jr laakiin sida uu shaaciyay wargayska AS ee caasimada Madrid ka soo baxaa, waxay hadda boodhka Real Madrid go’aan ku gaadheen in ayna galin tartanka Neymar Jr loogu jiro.
Boodhka kooxda Real Madrid ayaa hadda halis u arka in ay lacagta ay PSG ku doonayso Neymar Jr kula soo wareegi karaan maadaama oo ay haddaba Los Blancos suuqa ku kharash garaysay lacag ka badan 300 milyan yuro.
Inkasta oo uu Florentino Perez waqti dheer doonayay in uu maalin uun Neymar Jr ka soo dajiyo Bernabeu, haddana waqtiga hadda lagu jiro ayaan ahayn mid kooxdiisa caawinaya in ay lacag badan suuqa galin karto.
Real Madrid ayaa la sheegay in ayna xataa Pual Pogba la soo saxiixan karin ilaa ay marka hore ciyaartoy kooxdeeda ka tirsan iibiso taas oo xadidaysa in ay tartanka Neymar Jr gali karaan.
Sida xogtan lagu sheegay, boodhka kooxda Real Madrid ayaa dariiqa si cad ugu baneeyay kooxda Barcelona oo hadda kali ku noqon doonta suurtogalnimada ay Neymar Jr kooxdeeda ugu soo celin karto.
Real Madrid ayaa door bidaysa in halkii ay heshiiska qaaliga ah ee Neymar Jr ay kooxdeeda dhaqaale ahaan halis ugu galin lahayd in ay xagaaga soo socda bartilmaameedsadaan Kylian Mbappé oo iska diiday in uu heshiis cusub u saxiixo PSG.
In Real Madrid ay si dhab ah go’aan ugu gaadhay in ayna Neymar Jr kula tartamin Barcelona waxay caawinaysaa kooxda Camp Nou ka dhisan oo hadda PSG cadaadis ku saari karta wada xaajoodka ay ku jiraan isla markaana uu Neymar gadood ku maqan yahay.
Warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in Barcelona ay kooxda PSG la ciyaarayso ciyaar maskaxeed ay dib ugu dhigayso waqtiga ay Neymar Jr dalabka ka gudbin doonto maadaama oo uu xidiga reer Brazil haddaba diiday in uu tababarka qaato.
PSG ayay dhibaato ku noqon kartaa in Neymar Jr oo aan faraxsanayn ay kooxdeeda ku sii hayn karto waxaana sidoo kale dhibaato ku ah in dalabka Barcelona uu soo daaho maadaama oo ay badalkiisa suuqa ka raadsan lahaayeen.
Waxayna u muuqataa in ka bixitaanka Real Madrid ee wararkii la xidhiidhinayay Neymar Jr uu hadda xaalada ku sii xumaynayo maamulka Paris kuwaas oo hal doorasho oo kaliya haysta taas oo ah in ay Barcelona la sii wadaan wada xaajoodka ciyaartoyda kale qaybta looga dhigayo in xidiga reer Brazil uu Camp Nou ku soo laabto.